Garsoorayaasha Maxkamadaha DGPL oo Tababar Logu Soo Gabagabeeyey Garoowe
Sawirada ka eeg halkan... Guji
Waxaaa loogu soo gabagabeeyay Garsoorayaasha Maxkamadaha DGPL Tababar u socday mudo Sadex bilood Tababarkaa ayaa kafurmay magaalada Garoowe 10kii Bishii Luuliyo xarunta hay,ada Dikonia, Tababarkaa ayaa waxaa Bixinayay Aqoonyahano ka socday hayda PDRC iyo kuwo madax banaan oo aqoon u leh arimaha Garsoorka , dhaqaalaha ku baxay tababarka ayaa waxaa bixiyay Hay,ada UNDP iyo Dikonia.
Tababarkaa ayaa waxa ay ka faa,iidaysanayeen Garsoorayaashu sidii kor loogu qaadilahaa arimaha Garsoorka Maxkamadaha tirade garsoorayaasha ka faa,idaystay ayaa waxaa ay ku dhowaayeen ilaa 30 Garsoore oo isugu jira Rag iyo Dumar ka kala yimi Magaalooyinka Gobolada Puntland.
Ma'aha markii ugu horeysay ee tababaro loo qabto Garsoorayaasha Gobolada Puntland waxaa haydaha jooga Dhulka Gobolada PL ay u qabteen tababaro kala duwan oo Qaar looga hadlaayo sidii loo heli lahaa Garsoor Cadaalada.
Tababarkaa ayaa waxaa ka hadlay xiritaankiisii Madaxweyne kuxigeenka DGPL Maxmed Cabdi Xaashi ayadoo ay ka soo qayb galeen Wasiiro ka tirsan DGPL, Gudoomiyaha Maxkamada Sare DGPL,Taliyaha Ciidanka Booliska DGPL iyo Agaasimayaasha Garsoorka DGPL waxaa iyagana Halkaa ka hadlay Madaxa hay,ada Dikonia saciido Maxamed Xirsi iyo kuxigenka hay,da PDRC Cabduqaadir Sheekh Maxamed oo fadhigoodu yahay Garoowe.
Ugu dambeentii ayaa waxaa halkaa lagu Gudoonsiiyay Garsoorayaashii ka faa,iidaystey Tababarkaa Shahaadooyin oo uu gudoonsiiyay Madaxweyne kuxigeenka DGPL.
Garoowe, Puntland Somaliya
Abdifatah Jama Mire